Salamo 119 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
Fankasitrahana ny tenin’Andriamanitra
“Inona no tokony hataon’ny tanora raha te hanao ny tsara foana izy?” (9)
“Mahafinaritra ahy ny fampahatsiahivanao” (24)
“Ny teninao no antenaiko” (74, 81, 114)
“Tiako erỳ ny lalànao!” (97)
“Lalin-tsaina kokoa noho ny mpampianatra ahy rehetra” (99)
“Jiro ho an’ny tongotro ny teninao” (105)
“Fahamarinana no votoatin’ny teninao” (160)
Miadana ireo tia ny lalàn’i Jehovah (165)
א [Alefa] 119 Sambatra izay tsy misy tsiny* amin’ny zavatra ataony,Dia izay mankatò ny* lalàn’i Jehovah.+ 2 Sambatra izay manaraka ny fampahatsiahivany,+Dia ireo mitady azy amin’ny fo manontolo.+ 3 Tsy mba zatra manao ny tsy marina ireny,Fa mandeha amin’ny lalana atoron’Andriamanitra.+ 4 Nanome baiko ianaoHoe tokony harahina tsara ny didinao.+ 5 Tiako aho raha mba tsy mivadika hoatr’izao foana,*+Ka mankatò an’ireo fitsipikao! 6 Dia tsy ho menatra aho+Rehefa mandinika ny didinao rehetra. 7 Hidera anao amin’ny fo madio aho,Rehefa fantatro fa ara-drariny ny didim-pitsaranao. 8 Hankatò ny fitsipikao aho. Enga anie ianao tsy hahafoy tanteraka ahy mihitsy! ב [Beta] 9 Inona no tokony hataon’ny tanora raha te hanao ny tsara foana* izy? Mila mitandrin-tena izy ka mankatò ny teninao.+ 10 Amin’ny foko manontolo no itadiavako anao. Aza avela hiala amin’ny didinao aho.+ 11 Ato am-poko no itehirizako ny teninao+Mba tsy hanotako aminao.+ 12 Hoderaina anie ianao, Jehovah ô!Ampianaro ahy ny fitsipikao. 13 Ny molotro no anambarakoNy didim-pitsarana rehetra navoakanao. 14 Mahafaly ahy ny fampahatsiahivanao,+Mahafaly ahy mihoatra noho ny zava-tsarobidy+ hafa rehetra. 15 Hisaintsaina* ny didinao aho,+Ary handinika ny lalanao.+ 16 Mahafinaritra ahy ny fitsipikao. Tsy hohadinoiko ny teninao.+ ג [Gimela] 17 Anehoy hatsaram-panahy ity mpanomponao,Mba ho velona sy hankatò ny teninao.+ 18 Sokafy ny masoko mba ho hitako tsaraNy zavatra mahatalanjona ao amin’ny lalànao. 19 Vahiny eto amin’ity tany ity aho.+ Aza afenina ahy ny didinao. 20 Maniry mafy hahafantatraNy didim-pitsaranao foana aho. 21 Teneninao mafy ireo sahisahy ratsy,Dia ireo olom-boaozona miala amin’ny didinao.+ 22 Esory amiko* ny fahafaham-baraka sy ny fanambaniana,Fa manaraka ny fampahatsiahivanao aho. 23 Na dia miara-mipetraka mba hanohitra ahy aza ny andriana,Dia misaintsaina* ny fitsipikao ity mpanomponao. 24 Mahafinaritra ahy ny fampahatsiahivanao;+Ireny no manoro hevitra ahy.+ ד [Daleta] 25 Mihohoka matory eo amin’ny vovoka aho.+ Tsimbino ny aiko, araka izay nolazainao.+ 26 Nolazaiko anao izay nataoko, dia namaly ahy ianao;Ampianaro ahy ny fitsipikao.+ 27 Ataovy azoko tsara ny hevitry* ny didinao,Mba hisaintsainako* ny zavatra mahatalanjona nataonao.+ 28 Tsy nahita tory aho noho ny alahelo. Ampaherezo aho, araka izay nolazainao. 29 Aza avela handeha amin’ny lalana feno fitaka+ aho,Ary iantrao ka ampahafantaro ny lalànao. 30 Ny lalan’ny tsy fivadihana no nofidiko.+ Ekeko hoe ara-drariny ny didim-pitsaranao. 31 Mifikitra amin’ny fampahatsiahivanao+ aho. Aza avela ho diso fanantenana*+ aho, Jehovah ô! 32 Ho mailaka hampihatra ny didinao aho eo amin’ny fiainako,*Satria halalahinao ny foko mba ho afaka handray an’izany.* ה [He] 33 Ampianaro ahy ny lalan’ny fitsipikao, Jehovah ô,+Dia hanaraka an’izany hatramin’ny farany+ aho. 34 Ataovy mahira-tsaina aho,Mba hankatoavako ny lalànaoSy hitandremako azy amin’ny foko manontolo. 35 Tariho* eo amin’ny lalan’ny didinao+ aho,Fa mahafinaritra ahy izany. 36 Ataovy izay hahatonga ny foko ho tia ny fampahatsiahivanao,Fa tsy ho tia tombony.+ 37 Aza avela hijery zavatra tsy misy ilana azy ny masoko;+Ampandehano amin’ny lalanao aho mba ho voatsimbina ny aiko. 38 Tanteraho amin’ny mpanomponao izay nampanantenainao,*Mba hatahorana anao.* 39 Esory amiko ny fahafaham-baraka atahorako,Fa tsara ny didim-pitsaranao.+ 40 Jereo fa maniry mafy hankatò ny didinao aho. Tsimbino ny aiko noho ny fahamarinanao. ו [Vao] 41 Enga anie ho tsapako, Jehovah ô, fa tia ahy sy tsy mivadika amiko ianao,+Ary mamonjy ahy araka ny efa nampanantenainao;*+ 42 Dia hovaliako ilay manaratsy ahy,Fa matoky ny teninao aho. 43 Aza esorina tanteraka eo am-bavako ny tenin’ny fahamarinana,Fa manantena* ny didim-pitsaranao aho. 44 Hankatoaviko foana ny lalànao,Mandrakizay mandrakizay.+ 45 Ary handehandeha eny amin’ny toerana tsy mampidi-doza*+ aho,Satria mikaroka ny didinao. 46 Hilaza ny fampahatsiahivanao eo anatrehan’ireo mpanjaka aho,Ary tsy ho menatra.+ 47 Mahafinaritra ahy ny didinao;Eny, tiako ireny.+ 48 Hanandra-tanana hivavaka aho satria tiako ny didinao,+Ary hosaintsainiko* ny fitsipikao.+ ז [Zaina] 49 Tsarovy ny teninao* tamiko mpanomponao,Izay nanomezanao ahy fanantenana.* 50 Izany no mampionona ahy rehefa ao anatin’ny fahoriana+ aho.Nitsimbina ny aiko mantsy ny teninao. 51 Maneso ahy loatra ny olona sahisahy ratsy,Nefa arahiko foana ny lalànao.+ 52 Mahatsiaro ny didim-pitsaranao fahiny+ aho, Jehovah ô,Ary mampionona ahy ireny.+ 53 Romotry ny hatezerana aho noho ny ratsy fanahy,Izay tsy miraharaha ny lalànao.+ 54 Ny fitsipikao no ataoko hira,Na aiza na aiza onenako.* 55 Mahatsiaro ny anaranao aho mandritra ny alina, Jehovah ô,+Mba hankatoavako ny lalànao. 56 Izany no fanaoko,Satria mankatò ny didinao aho. ח [Heta] 57 I Jehovah no anjarako;+Efa nampanantena aho fa hanaraka ny teninao.+ 58 Miangavy anao* amin’ny foko manontolo+ aho;Iantrao aho,+ araka ny efa nampanantenainao.* 59 Dinihiko tsara ny lalako,Mba hanitsiako ny diako ka hanarahako indray ny fampahatsiahivanao.+ 60 Mailaka be aho fa tsy mangataka androMankatò ny didinao.+ 61 Mihodidina amiko ny tadin’ny ratsy fanahy,Nefa tsy hadinoko ny lalànao.+ 62 Mifoha aho amin’ny misasakalina mba hisaotra anao,+Fa ara-drariny ny didim-pitsaranao. 63 Naman’izay rehetra matahotra anao aho,Ary naman’izay mankatò ny didinao.+ 64 Manenika ny tany ny fitiavanao sy ny tsy fivadihanao, Jehovah ô!+Ampianaro ahy ny fitsipikao. ט [Teta] 65 Manao soa amin’ny mpanomponao ianao,Jehovah ô, araka ny efa nolazainao. 66 Ampianaro hisaina tsara sy hanam-pahalalana+ aho,Fa atokisako ny didinao. 67 Diso lalana* aho tamin’izaho mbola tsy nijaly,Fa efa mankatò ny teninao+ kosa aho izao. 68 Tsara ianao+ ary tsara ny zavatra ataonao. Ampianaro ahy ny fitsipikao.+ 69 Manoso-potaka ahy ny olona sahisahy ratsy,Fa izaho kosa mankatò ny didinao amin’ny foko manontolo. 70 Tsy mihontsina* ny fon’ireny,+Fa izaho kosa finaritra amin’ny lalànao.+ 71 Soa ihany aho fa nampahorina,+Mba hianarako ny fitsipikao. 72 Mahasoa ahy ny lalàna nambaranao,+Mahasoa ahy noho ny volamena sy volafotsy+ an’arivony. י [Yôda] 73 Ny tananao no nanao sy namolavola ahy. Ataovy mahira-tsaina ahoMba hianarako ny didinao.+ 74 Mahita ahy ireo matahotra anao ka faly,Satria ny teninao no antenaiko.*+ 75 Fantatro, Jehovah ô, fa ara-drariny ny didim-pitsaranao,+Ary noho ianao tsy mivadika, dia faizinao aho.+ 76 Hampionona ahy anie ny fitiavanao sy ny tsy fivadihanao,+Araka ny nampanantenainao ny* mpanomponao! 77 Amindrao fo aho mba ho velona foana,+Fa mahafinaritra ahy ny lalànao.+ 78 Enga anie ho afa-baraka ireo sahisahy ratsy,Satria manisy ratsy ahy tsy amin’antony.* Fa izaho kosa hisaintsaina* ny didinao.+ 79 Aoka hiaraka amiko indray ireo matahotra anao,Dia ireo mahafantatra ny fampahatsiahivanao. 80 Enga anie ny foko tsy hisy tsiny rehefa mankatò ny fitsipikao,+Mba tsy ho menatra aho!+ כ [Kafa] 81 Tsy andriko izay hamonjenao ahy,*+Satria ny teninao no antenaiko.* 82 Sasa-miandry ny hahatanterahan’ny teninao ny masoko,+Ka hoy aho: “Mba rahoviana ihany ianao vao hampionona ahy?”+ 83 Fa toy ny siny hoditra mainan’ny setroka aho,Nefa tsy hadinoko ny fitsipikao.+ 84 Firy andro ny mpanomponao no tsy maintsy miandry? Rahoviana ihany ianao no hampihatra didim-pitsarana amin’ireo manenjika ahy?+ 85 Mihady lavaka hamandrihana ahy ny olona sahisahy ratsy,Dia ireo tsy mety manaraka ny lalànao. 86 Azo atokisana ny didinao rehetra. Vonjeo aho+ fa misy manenjika tsy amin’antony! 87 Efa saika nofongoran’izy ireo tsy ho eto an-tany aho,Nefa izaho tsy nahafoy ny didinao. 88 Tsimbino ny aiko noho ianao be fitiavana sy tsy mivadika,Mba hanarahako ny fampahatsiahivana nolazainao. ל [Lameda] 89 Mandrakizay, Jehovah ô,Haharitra mandrakizay any an-danitra ny teninao.+ 90 Maharitra hatramin’ny taranaka fara aman-dimby ny tsy fivadihanao.+ Nataonao mafy orina ny tany mba ho eo foana.+ 91 Araka ny didim-pitsarana navoakanao, dia mbola eo ireo* mandraka androany,Satria mpanomponao izy rehetra. 92 Raha tsy ny lalànao no nahafinaritra ahy,Dia ho efa maty tao anatin’ny fahoriako aho hoatr’izay.+ 93 Tsy hohadinoiko mihitsy ny didinao,Satria ireny no itsimbinanao ny aiko.+ 94 Anao aho; vonjeo aho+Satria ny didinao no karohiko.+ 95 Miandry kendry tohina fotsiny ny ratsy fanahy mba hamonoana ahy,Fa izaho kosa mandinika tsara an’ireo fampahatsiahivanao. 96 Hitako fa manam-petra ihany izay rehetra tonga lafatra,Fa ny didinao kosa tsy manam-petra.* מ [Mema] 97 Tiako erỳ ny lalànao,+ Ka saintsainiko* tontolo andro!+ 98 Mahatonga ahy ho hendry noho ny fahavaloko ny didinao,+Satria ato anatiko mandrakizay izany. 99 Lalin-tsaina kokoa noho ny mpampianatra ahy rehetra aho,+Satria misaintsaina* an’ireo fampahatsiahivanao. 100 Mahira-tsaina kokoa noho ny zokiolona aho amin’izay rehetra ataoko,Satria mankatò ny didinao. 101 Tsy manaiky handeha amin’ny lalan-dratsy aho,+Mba hahafahako manaraka ny teninao. 102 Tsy miala amin’ny didim-pitsaranao aho,Satria ianao no mampianatra ahy. 103 Mamy amin’ny lelako erỳ ny teninao,Mamy ao am-bavako mihoatra noho ny tantely!+ 104 Ny didinao no mahatonga ahy hahira-tsaina+ amin’izay ataoko, Ka halako ny lalan-diso+ rehetra. נ [Nona] 105 Jiro ho an’ny tongotro ny teninao,Sady fahazavana ho an’ny lalako.+ 106 Nianiana aho ary hotanterahiko izany,Dia ny hoe harahiko ny didim-pitsaranao ara-drariny. 107 Ampahorina mafy aho.+ Jehovah ô, tsimbino ny aiko araka ny efa nolazainao.+ 108 Jehovah ô, mba ankasitraho re ny fanati-piderana+ atolotro anao an-tsitrapo* e,Ary ampianaro ahy ny didim-pitsaranao!+ 109 Tandindomin-doza* foana ny aiko,Nefa tsy manadino ny lalànao+ aho. 110 Mamelatra fandrika hahazoana ahy ny ratsy fanahy,Nefa tsy mahafoy ny didinao aho.+ 111 Raisiko ho fananako* mandrakizay ny fampahatsiahivanao,Fa ireny no mahafaly ny foko.+ 112 Tapa-kevitra ny* hankatò ny fitsipikao aho,Eny, hankatò an’izany foana, hatramin’ny farany. ס [Sameka] 113 Halako ny olona miroaroa saina,*+Fa tiako kosa ny lalànao.+ 114 Fialofako sy ampingako ianao,+Satria ny teninao no antenaiko.*+ 115 Aza manakaikikaiky ahy mihitsy ianareo mpanao ratsy,+Mba hankatoavako ny didin’Andriamanitro. 116 Ampio aho, araka ny efa nampanantenainao,*+Mba ho velona foana.Aza avela ho diso fanantenana*+ aho. 117 Ampio aho mba ho voavonjy,+Dia hifantoka foana amin’ny fitsipikao.+ 118 Lavinao daholo izay tsy manaraka ny fitsipikao,+Satria mandainga izy ireo sady mamitaka. 119 Arianao toy ny tain-drendrika ny ratsy fanahy rehetra eto an-tany.+ Izany no itiavako ny fampahatsiahivanao. 120 Mipararetra aho* fa matahotra anao;Atahorako ny didim-pitsaranao. ע [Aina] 121 Manao ny rariny sy ny hitsiny aho. Aza afoy eo an-tanan’ireo mpampijaly aho! 122 Ataovy azo antoka hoe hahita soa ny mpanomponao;Enga anie tsy hampijaly ahy ny olona sahisahy ratsy! 123 Reraka ny masoko miandry ny famonjenao+Sy ny fampanantenana azo antoka*+ nataonao. 124 Asehoy hoe tianao ny mpanomponao sady tsy mivadika aminy ianao,+Ary ampianaro ahy ny fitsipikao.+ 125 Mpanomponao aho; ataovy mahira-tsaina+ aho,Mba ho azoko ny fampahatsiahivanao. 126 Tonga ny fotoana anaovan’i Jehovah zavatra,+Fa mandika ny lalànao izy ireo. 127 Izany no itiavako ny didinaoMihoatra noho ny volamena, na dia ny volamena tena tsara* aza.+ 128 Koa amiko dia marina daholo ny toromarika omenao;*+Halako ny lalan-diso+ rehetra. פ [Pe] 129 Mahatalanjona ny fampahatsiahivanao. Izany no antony anarahako azy ireny. 130 Lasa misy hazavana+ rehefa aharihary ny teninao,Ka manjary mahira-tsaina ireo mbola tsy dia nahita fiainana.+ 131 Sokafako mitanatana ny vavako ary misento* aho,Satria maniry mafy hankatò an’ireo didinao.+ 132 Tsinjovy aho ka iantrao,+Araka ny didim-pitsarana navoakanao ho an’ireo tia ny anaranao.+ 133 Tariho amin’ny alalan’ny teninao aho mba ho voaro* ny diako;Enga anie tsy hisy zava-dratsy hanandevo ahy!+ 134 Vonjeo* tsy ho azon’ny olona mpampijaly aho,Dia hankatoaviko ny didinao. 135 Aoka ianao ho miramirana* amin’ny mpanomponao,+Ary ampianaro ahy ny fitsipikao. 136 Mikoriana ny ranomasoko,Satria tsy mankatò ny lalànao ny olona.+ צ [Tsade] 137 Tia rariny ianao, Jehovah ô,+Ary ara-drariny ny didim-pitsaranao.+ 138 Marina ny fampahatsiahivana omenao,Sady azo atokisana tanteraka. 139 Toy ny afo miredareda ato anatiko ny hafanam-poko,+Satria nohadinoin’ny fahavaloko ny teninao. 140 Madio* tsara ny teninao,+Ka tian’ny mpanomponao.+ 141 Tsinontsinona aho ary ambanina,+Nefa tsy mba hadinoko ny didinao. 142 Fahamarinana mandrakizay ny fahamarinanao,+Ary marina ny lalànao.+ 143 Na dia azom-pahoriana sy miatrika zava-tsarotra aza aho,Dia mahafinaritra ahy foana ny didinao. 144 Marina mandrakizay ny fampahatsiahivanao. Ataovy mahira-tsaina+ aho mba ho velona foana. ק [Kôfa] 145 Miantso anao amin’ny foko manontolo aho ka valio, Jehovah ô! Ny fitsipikao no hankatoaviko. 146 Miantso anao aho; vonjeo aho! Harahiko ny fampahatsiahivanao. 147 Mbola tsy mangiran-dratsy akory dia efa mifoha aho mba hiantso vonjy aminao,+Satria ny teninao no antenaiko.* 148 Mbola tsy mifarana ny fiambenana amin’ny alina dia efa mihiratra ny masoko,Mba ho afaka hisaintsaina* ny teninao aho.+ 149 Henoy aho noho ianao be fitiavana sy tsy mivadika.+ Jehovah ô, tsimbino ny aiko satria manao ny rariny ianao. 150 Mihamanakaiky ireo manana fitondran-tena mahamenatra;*Halavirin’izy ireo ny lalànao. 151 Akaiky ianao, Jehovah ô,+Ary marina daholo ny didinao.+ 152 Efa hatry ny ela no nahafantarako an’ireo fampahatsiahivanao,Izay nataonao mafy orina mandrakizay.+ ר [Resa] 153 Jereo ny fahoriako ka vonjeo aho,+Fa tsy mba hadinoko ny lalànao. 154 Arovy aho,* ary vonjeo aho;+Tsimbino ny aiko, araka ny efa nampanantenainao.* 155 Lavitra ny ratsy fanahy ny famonjena,Satria tsy mikaroka ny fitsipikao izy ireo.+ 156 Be famindram-po ianao, Jehovah ô!+ Tsimbino ny aiko satria manao ny rariny ianao. 157 Maro ny mpanenjika ahy sy ny fahavaloko;+Tsy miala amin’ny fampahatsiahivanao anefa aho. 158 Rikoriko aho mahita ny mpamitaka,Satria tsy mankatò ny teninao izy ireny.+ 159 Jereo fa tiako erỳ ny didinao! Jehovah ô, tsimbino ny aiko noho ianao be fitiavana sy tsy mivadika.+ 160 Fahamarinana no votoatin’ny teninao,+Ary maharitra mandrakizay daholo ny didim-pitsaranao ara-drariny. ש [Sina] na [Shina] 161 Manenjika ahy tsy amin’antony ny andriana,+Nefa ny teninao no atahoran’ny foko.+ 162 Mahafaly ahy ny teninao,+Toy ny rehefa mahazo babo be dia be. 163 Halako ny lainga—Tsy tiako maizina izany+—Ny lalànao no tiako.+ 164 Impito isan’andro aho no midera anao,Satria ara-drariny ny didim-pitsaranao. 165 Be ny fiadanan’ireo tia ny lalànao;+Tsy misy na inona na inona mahatafintohina azy. 166 Manantena an’ireo asa famonjenao aho, Jehovah ô,Ary mankatò ny didinao. 167 Arahiko ny fampahatsiahivanao,Ary tena tiako ireny.+ 168 Ankatoaviko ny didinao sy ny fampahatsiahivanao,Satria fantatrao daholo izay ataoko.+ ת [Tao] 169 Ho tonga any aminao anie ny antso vonjy ataoko, Jehovah ô!+ Ataovy mahira-tsaina+ aho, araka ny teninao. 170 Ho tonga eo anatrehanao anie ny fitalahoako famindram-po! Vonjeo aho, araka ny efa nampanantenainao.* 171 Hiboiboika fiderana anie ny molotro,+Satria ampianarinao ahy ny fitsipikao! 172 Hihira momba ny teninao anie ny lelako,+Fa ara-drariny daholo ny didinao! 173 Ho vonona hanampy ahy anie ny tananao,+Satria mifidy ny hankatò ny didinao+ aho! 174 Tsy andriko izay hamonjenao ahy, Jehovah ô,Ary mahafinaritra ahy ny lalànao.+ 175 Enga anie aho ho velona mba ho afaka hidera anao;+Hanampy ahy anie ny didim-pitsaranao! 176 Mirenireny toy ny ondry very+ aho. Mba tadiavo ity mpanomponao,Satria tsy manadino an’ireo didinao.+
^ Na: “izay tsy mivadika.”
^ Na: “mandeha amin’ny.”
^ Abt: “Ho mafy orina anie ny lalako.”
^ Abt: “hiaro ny lalany ho madio foana.”
^ Na: “Hianatra.”
^ Abt: “Ahorony hiala eo amboniko.”
^ Na: “mianatra.”
^ Abt: “lalan’ny.”
^ Na: “hianarako.”
^ Na: “ho menatra.”
^ Na: “Hihazakazaka hanaraka ny lalan’ny didinao aho.”
^ Na mety hoe “ataonao feno toky ny foko.”
^ Na: “Ampandehano.”
^ Na: “ny teninao.”
^ Na mety hoe “Izay natao tamin’ireo matahotra anao.”
^ Na: “miandry.”
^ Na: “toerana malalaka.”
^ Na: “fampanantenanao.”
^ Na: “Izay nasainao nandrasako.”
^ Na: “Ao amin’ny trano ivahiniako.”
^ Abt: “Mampitony ny tarehinao.” Na: “Mitady tsiky avy aminao.”
^ Na: “Nanota tsy nahy.”
^ Abt: “Tsy mahatsapa na inona na inona hoatran’ny tavy.”
^ Na: “miandry ny teninao aho.”
^ Na: “ny teninao tamin’ny.”
^ Na mety hoe “amin’ny lainga.”
^ Na: “Miandrandra ny famonjenao aho.”
^ Izany hoe ny zavaboary rehetra noforoniny.
^ Abt: “malalaka be.”
^ Na: “ianarako.”
^ Abt: “ny fanatitra an-tsitrapo avy amin’ny vavako.”
^ Na: “Eo an-tanako.”
^ Na: “lovako.”
^ Na: “Mampirisika ny foko.”
^ Na: “manana fo voazarazara.”
^ Abt: “ny nofoko.”
^ Na: “ny teny marina.”
^ Na: “voadio.”
^ Na: “ny didinao.”
^ Abt: “sempotsempotra.”
^ Na: “Ataovy mamahatra tsara amin’ny teninao.”
^ Abt: “Avoty.”
^ Na: “hitsiky.” Abt: “hampamirapiratra ny tavanao.”
^ Avy amin’ny teny hebreo midika ara-bakiteny hoe mandrendrika metaly mba hanadiovana azy.
^ Na: “mamoafady.”
^ Na: “Raiso an-tanana ny adiko eny amin’ny fitsarana.”